Ny fahaiza-tononiny fa misy amin'ny ankapobeny indrindra hazandrano amin'ny tolotra manokana. Na dia tsy misy misambotra dia hendry ny mieritreritra fa mety hisy. Fomba fisainana izany dia mamela anao hijanona eo ny mpiambina sy hijerena tsara ny efaha alohan'ny tonga any izy ireo. Indraindray isika dia mety hihazakazaka ho fandrika satria tsy manao ny enti-mody araka ny tokony ho, mahay loatra momba izany na haingana. Ireto ny sasany amin'ny fandrika tokony ho mailo, rehefa mividy fiara ny fiantohana.
Fividianana taorian'ny Quote Voalohany
Mpanao voalohany izany dia ny fahadisoana mba hanao. Raha tsy dia manam-pahaizana momba ny foto-kevitra inona no ho fantatrao ianao hahazo tsara fandrakofana sy ny vidin'ny raha tsy hampitaha ny safidy? Rehefa mazoto loatra mba nanarona ny fiara vaovao haingana mba afaka handroaka anareo mba hamandrika ny tenanao ho toy ny tsy ampy na lafo vidy fandrakofana.
Mila ora vitsivitsy, ary ny ankamaroany andro mba hitady fiara. Afaka mijery tsara mora foana ny politika any am-piandrasana izany. Tsy voatery ho manana ny fiara eo alohanao dia afaka mahazo azy io ny teny. Raha hiantso ny broker isan'andro amin'ny fiara hafa tsipiriany mba hahazo teny dia hahazo leo aminareo faingana. Na izany aza, sehatra teny an-tserasera mamela anao hahazo na inona na inona omena teny notsongaina fiara. Afaka mampiasa ireo fitaovana betsaka araka izay tianao ianao satria manao ny asa.
Mividy tsy ampy Coverage
Ny iray amin'ireo fahadisoana mahazatra indrindra dia ny mandidy ny mpitondra manao politika mihevitra fa ho mora lavitra raha mandeha ho fanjakana ambany indrindra takiana liabilities rakotra. Ny maha-samihafa ny Premium fandrakofana fototra sy ny ankapobeny ihany no misy afaka ho roa-jato dolara amin'ny tranga sasany, indrindra rehefa miantsena manodidina tsara.
Basic fonony dia tena kely indrindra, ary nanoro hevitra ianao mba hividy ampy kosa liabilities mandrakotra. Ankoatra izany, politika ireo dia tsy mitondra fandrakofana noho ny fahavoazany. Fiara amin'ny ankapobeny ny fampiasam-bola lehibe ho an'ny ankamaroan'ny olona. Fandaniana $5,000 ho efa nampiasaina ela Auto toa toy ny harena ho anareo, raha tsy manana ny vola. Rehefa nahazo tsara sy manam-bola ianao dia ho mitondra $50,000 fiara ihany. Izy roa ireo dia mety ho fampiasam-bola lehibe tsy mba bola.
Be loatra Deductibles
Ankapobeny, ny ambony ambany ny deductibles ny mahazo ny premiums. Izany, raha misy teny fiantohana fiara manokana dia be mora kokoa noho ny hafa izy ireo tokony hijerena ny deductibles. Izao no vola tsy maintsy mandoa avy amin'ny paosy eo anoloan'ny insurer afaka mandoa ny sisa amin'ny fahavoazana. Raha toa ka napetrany teo ambony koa dia mety hiafara mandoa ny ankamaroan'ny fahasimbana ny tenanao. Ary ho sarotra ny hiatrika izany raha mihoatra ny iray mampalahelo zava-nitranga tamin'ny herintaona.
Ny fitsipika tokony handrakotra politika olombelona rehetra ao amin'ny ankohonany ihany aminareo koa indraindray misy mpamily. Rehefa manaiky ny teny fiantohana fiara mora dia mety tsy nijery izay avela hitondra fiara ny fiara. Raha toa ka ny tsy ho hamela olon-kafa hitondra ny fiara azo antoka, raha ny marina dia azonao atao ny mametra ny mpamily mba policyholder na lisitra mpamily mba hamonjy vola fotsiny. Zava-dehibe ny hoe iza no sy izay tsy azo antoka mitondra fiara ny fiara sy ny fitantanana izany mifanaraka amin'izany.
Conditions manokana sy ny Exclusions
Mitandrema Amin'ny toe-javatra manokana ao amin'ny politika wordings. Ohatra, politika sasany dia mety hamela ny insurer hampiasa aftermarket faritra mba hanamboarana iray azo antoka Auto onitra manaraka ho azy. Mety tsy ho raharaha lehibe Raha toa ka manana fiara antitra, ary ianao mahazo fihenam-bidy tsara noho izany toe-javatra. Fa tsy tianao ny toe-piainana toy izany, rehefa manana Somary vaovao sy fiara lafo vidy.
Tandindona iray hafa mampiavaka ny mora politika dia mba tsy hanatitra ny fahalalam-pomba fiara rehefa anareo ao amin'ny garazy ho namboatra. Indray, izany mety tsy ho olana lehibe ho anao sy mety raha ny marina kokoa mba hahazo fihenam-bidy izao fa tsy mahazo ny fahalalam-pomba, raha ny fiara fiara ve vokany simba. Fotsiny fa maro ny olona mitaraina taorian'ny zava-nitranga fa tsy nomena ny fahalalam-pomba fiara, raha tsy nisy toy izany eo amin'ny politika fandaharana.
Raha heverina ny politika rehetra dia mitovy
Ny tokan-tena dia mety ho Auto insurer fanatitra maro ambaratonga samy hafa ny politika izay mihevitra ho manana ny politika rehetra amidy eny an-tsena dia ho toy izany koa dia somary tsy mahalala. Politika rehetra manana fiovana kely na lehibe avy amin'ny hafa. Ankapobeny izany dia hita taratra eo amin'ny vidiny. Araka ny cheapautoinsurance.net, "Mety hahazo latsaky ny mahafa-po politika, ary mbola mandoa ny Premium indraindray feno raha tsy miantsena manodidina".
Raha heverina Rates Mitovy manerana ny Market
Indray, izany dia mitombina fiandrasana satria orinasa rehetra dia toy ny olona araka mahazo. Izy ireo format manan-tompo sy ny Premium mety kajikajy sy fomba tokana ny mihazakazaka ny raharaham-barotra. Rehefa misy orinasa tena malaza izy ireo mazava ho azy ho afaka haka ny tsara indrindra tamin'ny bunch eo amin'ny ny doza. Ary raha mahita famantarana kely ny loza mety haingana izy ireo ka ny vidin'ny. Na izany aza, tsy dia malaza ny orinasa dia tsy maintsy foana ny vidin-javatra eo amin'ny maso mba ho azo antoka fa afaka mandresy ny raharaha.
Fandoavana ny isam-bolana
Mazava ho azy, dia mora kokoa ny handoavana ny isam-bolana tsy misy isalasalana ny momba izany. Na izany aza, fiantohana premiums dia noho ny fandoavam-bola tamin'ny fotoana nitsanganany. Raha misy orinasa no mamela anao hampiely ny fandoavam-bola izy ireo dia ny fanatitra hohanina bola. Ankapobeny izany dia tonga amin'ny vidiny. Matetika izy ireo liana Mampianiana sy ny fanatitra fihenam-bidy manokana ho an'ny olona izay mandoa upfront sy manontolo. Dia hanjary hanome karama intsony ianao, raha namelatra ny fandoavam-bola.
Mividy lafo vidy ny antoka Automobile
Mandidy ny mpitondra fiara maro, ary tonga saina nividy rehefa afaka izany, fa lafo loatra ny antoka ny mitety ny vaovao. Rehefa mieritreritra fanatanjahan-tena fiara, SUVs, 4x4s sy tsy mahazatra ireo izay tokony ho mailo fa mety ho lafo vidy ny antoka azy ireo. Premium fahasamihafana dia mety ho toy telo heny eo amin'ny safidy ny fiara A sy Car B.
Tsy mila mahafantatra zava-miafina maro mba takatry ny fiara fiantohana. Fa, tokony ho fantatrao sy ho mahafantatra Tricks vitsivitsy. Avy eo dia, afaka ny fanangonam-bola foana rehefa fanavaozana fanavaozana. Ny tsy hitandrina ireo fitsipika fototra afaka lany vola ianao.
Auto Car Insurance: Ahoana no mba hahabetsaka ny mponina ny Policy